Indlu encinane ngasemfuleni
Indlu evalelweyo ecaleni komlambo ibekwe kumbindi weDobrna, i-100m ukusuka eTerme Dobrna. Indlu ye-fairytale, ebonakaliswe kukwakhiwa kwe-suburban, lilifa lenkcubeko elikhuselweyo, kwaye ingaphakathi lihonjiswe ngendlela yelizwe lanamhlanje, linikezela yonke into yokuhlala ixesha elifutshane okanye ixesha elide. I-Topliški potok igeleza ecaleni kwendlu, apho kukho ukufikelela kwangasese kunye nokudlala ngokukhuselekileyo kubantwana. Ejikeleze indlu kukho indawo eluhlaza yokuphumla, imisebenzi yezemidlalo (iiprops ezikhoyo kwi-APP) okanye i-barbecue.
Indlu esecaleni komlambo ine-air conditioning kwaye inayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale ixesha elide (ifriji, i-oven ene-ceramic hob, i-dishwasher ...). Ifakwe kwisitayile selizwe langoku nayo yonke into oyifunayo ukuze uzive usekhaya. Ngethuba lokuhlala kwakho, uya kunandipha ukuphumla kwindawo eluhlaza, imisebenzi yezemidlalo (iiprops ezifumaneka kwi-APP), ukugcoba, ukubukela abantwana bedlala emfuleni okanye begxuma kwi-trampoline, efumaneka kwiindwendwe ngaphandle kwentlawulo.
Iibhayisekile kunye nerenti yezilwanyana zasekhaya ziyafumaneka ngolungiselelo lwangaphambili.
Indlu ngasemfuleni ibekwe kumbindi Dobrna, ukufikelela kuzo zonke iivenkile, zokutyela, ukuhamba kunye neendledlana ibhayisekile, ipaki, iinkundla tennis, ibala lokudlala labantwana ..., zilula kwaye ngaphakathi ubuninzi 400 m.
Sifumaneka ngoncedo kunye neengcebiso ngexesha lokuhlala kwakho.